Khariidada Iswiidhan iyo dalalka dariska.
Sawir: Josefin Berger
Iswiidan waxeey leedahay afar xilli: gu’, xagaa, dayr iyo jiilaal iyo jawi leh farqi-heerkuleed oo badan. Cimilada dalka Iswiidan waxaa saameeya mawjadaha kuleelka ee Badweynta Atlaantik. Sidaas darted ayey Iswiidan uga kulushahay dalal kale ee waqooyiga Yurub.
Iswiidhan waxaa ka jiro wax ya yiraahdo xuquuqda dhexjoog dabiicada. Xuquuqdaan waxeey qof walba xaq u siinaysaa in uu dhexjoogo dabiicada oo uu ka mid yahay dhulka bannaan oo qof leeyahay. Micnaha kale ee xaqa dhegjoogga dabiicada waa in aan laga taxadarno oo xushmad loo muujinno marka la dhexjoogo dabiicada. Xaqa dhexjoogga dabiicada wuxuu ku qoran dastuurka Iswiidan, wuxuuna qeexayaa waxa la oggol yahay iyo wax aan la oggolayn. Bogga internetka Hey'adda ilaalinta dabiicada (Naturvårdsverket), www.naturvardsverket.se, waxaad ka akhrisan kartaa xuquuqda dhexjoogga dabiicada oo ku qoran afaf badan.
Seerada dabiicadda ee Herrestafjället.
< Ullaabo cutubka lasoo dhaafay